Sida Loo Helo Gaadiidka Wanaagsan Isticmaalka Todoba Tixraaca Twitter ee Talooyin Ka Sareeya Cimilada
Twitter ayaa heshiis la galay Google taasoo ka dhigtay tweets 140-dabeecadood oo intaa ka badan oo la raadin karo. Ka dib, Twitter ayaa si buuxda u siiyay Google oo dhan dhamaan tweets, oo loo yaqaan "Firehose." Google badiyaa waxay qiimeeyaan sicirka bulshada iyo tirade dadka raacsan sida muhiimadda ugu weyn waxayna dooraneysaa waxa lagu muujinayo. Natiijo ahaan, haysashada saameyn macquul ah oo ku saabsan Twitter waa muhiim waana in la naqshadeeyo waa muhiim - enterprise mobility certification. Marka la eego, Jack Miller, Maareeyaha Guusha Guud ee Macaamiisha Semt , wuxuu soo bandhigayaa talooyinka soo socda ee soo socda si aad u codsatid suuqgeynta:
Marwalba iska ilaali adigoo adeegsanaya ereyo la mid ah ereyada isku midka ah oo laga arki karo website-ka. Hashtags waxay hagaajinaysaa raadinta waxayna caawisaa dadka si toos ah uuga qayb galaan. Soo-jeedinta ereyada muhiimka ah ee ku saabsan qaar ka mid ah liistada ayaa, markaa, waxay soo gali karaan marka ay dadku raadinayaan mowduucyo gaar ah. Ha xad-dhaafin bogga kumbuyuutarka ee ku qoran tweet-ka maaddaama ay u egtahay in ay u egtahay spammy iyo in ay jeedsadaan kuwa raacsan. Iska hubi inaad falanqayso isqagaajinnada leh kuwa ugu firfircoon, jecel, ama retweets oo u adeegso si ay ufilaacaan astaantaada. Falanqaynta Twitter waa inay ka caawiyaan sidii loo ogaan lahaa waxa ugu wanaagsan ganacsiga. Hubi in tweet uu leeyahay macluumaad badan oo faahfaahsan oo ku jira, iyo noocyo warbaahin oo dhowr ah oo ka mid noqon kara 140 xaraf.
Inuu u Hagaajiyo Profile for SEO
Hubi in hufnaanta ee profile ay xaqiijinayso raadinta. Marka ay isticmaalayaashu isticmaalaan lambarrada macaamiishooda ama gacan qabashadooda, waxaa laga yaabaa inay saameyn xun ku yeeshaan labada qaybood ee ganacsiga, sida Google uu ula dhaqmi doono sida spam.
Beddelidda gacmaha ama isticmaalaha isticmaale ahaan waa mid sahlan..Si kastaba ha ahaatee, khabiiro kuma talin karaan maadaama ay ku wareersan tahay dadka isticmaala tan iyo markii calaamad muujineysa la wadaago magaca. Calaamadaha saxda ah waa kuwa isticmaala kuwa ku tiirsan si ay u sheegaan in xogtu ay ku jirto macluumaad sax ah oo sax ah oo ku saabsan hay'adaha ganacsiga ama tirooyinka dadweynaha.
Google ayaa sidoo kale ka dhigeysa dhibco lagu muujinayo bio lagu bixiyo bogga Twitter. Biyoolojigu wuxuu dadka ku wargaliyaa waxa laga filaayo tweets ka soo baxa profile gaar ah. 160ka xarfaha ee la bixiyay, fududaanta iyo saxnaanta waa xulafadaada ugu wanaagsan. Soo bandhig qaybaha ugu muhiimsan ee habka ugu haboon oo aad xasuusnaato inaad ku darto heerka khibrada. Haddii ay jiraan xisaabaadyo kale oo twitter ah, ku dar isku mid ah dhammaantood si loo hubiyo in si habboon loo kala wareejiyo dadka isticmaala.
Dajinta Sawir Sawir ah
Ka hor inta aan la sameynin sawir qaadashada, hubi inaad u habeyso faylalka. Qaar ka mid ah talooyin ku saabsan tan waa inay hubiyaan in ay ku jiraan ereyo muhiim ah, ama kala saar ereyada muhiimka ah iyadoo la adeegsanayo dhirbaaxo taas oo sahlaysa inay muujiso in search engine .
Sida ay tahay ololaha SEO , waa inay jirtaa wicitaan ficil ah booqdaha taas oo ah waxa isku xira bogga internetka ee Twitter noqon doono. Go'aanso bogga bogagga intiisa badani waxay ku xiran yihiin macluumaadka ku qoran bogga, iyo halka qofku jeclaan lahaa in loo diro taageerayaashooda. Xiriirka isku-dhafan wuxuu abuuraa gaadiidka badan oo kordhiya kalsoonida
Retweets waxay kaa caawinayaan kordhinta taraafikada, sidaa darteed waxaad dareemi kartaa lacag la'aan markaad weydiisaneyso wadaagista. Si aad uhesho qolka retweets, qor qoraalada gaaban maxaa yeelay waxay u oggolaaneysaa dadka in ay ku daraan faallooyin ama ka hadlaan dadka kale markay retweeting
Ku dar Sawirada Bulshada ee Natiijooyinka Raadinta
U hubso inaad sheegto mid ka mid ah qaybaha bulshadu leedahay ee aad doorbidayso oo ay ku jiraan koodhadhka bogga ee bogga